Special Programs | Reporting from Washington
Archive for the ‘Special Programs’ Category	Interview with President adviser U Ko Ko Hlaing (part-2)
၆၄ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အတွက် RFA က သီးသန့် မေးမြန်းတင်ပြချက်တွေကို စုစည်းထားပါတယ်။
၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျဆုံးခဲ့ကျသော အာဇာနည်များ။ ဓါတ်ပုံ – RFA
အာဇာနည်နေ့ကို အလေးအနက် မထားတာဟာ အာဇာနည် စိတ်ဓာတ်ကို တန်ဖိုးမထားရာ ရောက်သလို မြန်မာနိုင်ငံမှာ အာဇာနည် သူရဲကောင်းတွေ ပေါ်ထွက်လာမှာကို ကန့်သတ် ဖိနှိပ်တာမျိုးလည်း ဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အာဇာနည်နေ့ အကြိုနေ့မှာ RFA နဲ့ သီးသန့် မေးမြန်းရာမှာ ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အာဇာနည်ဆိုတာက သူ့စိတ်ဓါတ်ကိုက ထူးကဲတာမို့လို့ ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးမှာမဆို အချိန်တန်ရင်တော့ ပေါ်ပေါက်လာကြမှာဘဲ လို့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။ အာဇာနည်နေ့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သဘောထား အမြင်တွေကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းပြီး ဦးခင်မောင်စိုး စုစည်းတင်ပြထားတာကို နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ဒဂုန်တာရာ နဲ့ ဦးလွင်တို့ရဲ့ ပြန်ပြောင်း ပြောပြချက်
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘ၀ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ကဗျာဆရာ စာရေးဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာနဲ့ အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်တွေ ကျဆုံးစဉ်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ရုပ်ကလပ်ကို နေအိမ်ကနေ ဂျူဗလီဟောအထိ သယ်ဆောင်ရာမှာ အထူးလုံခြုံရေး တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ NLD ခေါင်းဆောင် ဦးလွင်တို့ရဲ့ ပြန်ပြောင်း ပြောပြချက်တွေကို ကိုဥာဏ်ဝင်းအောင်က စုစည်း တင်ပြထားပါတယ်။
ဒဂုန်တာရာ နဲ့ ဦးလွင်
ဦးရာဇတ် သမီး ဒေါ်ခင်ခင်စိန်ရဲ့ အာဇာနည်နေ့ အမှတ်တရ ခံစားချက်
အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဦးရာဇတ်ရဲ့ သမီးဖြစ်သူ လက်ရှိ သြစတေးလျ နိုင်ငံမှာ နေထိုင်နေတဲ့ ဒေါ်ခင်ခင်စိန်ရဲ့ အာဇာနည်နေ့ အမှတ်တရ ခံစားချက်ကို ဒေါ်ခင်ခင်အိ တင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ဦးရာဇတ် သမီး ဒေါ်ခင်ခင်စိန်
တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များရဲ့ အမြင်
၁၉၉၀-ရွေးကောက်ပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံ တနိုင်ငံလုံး အမတ်နေရာ တတိယ အများဆုံး ရရှိခဲ့တဲ့ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးအေးသာအောင်က အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို မှေးမှိန်အောင် လုပ်တာဟာ သမိုင်းကို ဖျောက်ဖျက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့် အတွက် လက်နက်ကိုင် တိုက်ခိုက်နေတဲ့ ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး KNU ရဲ့ ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ် တာမလာဘော ရဲ့ အမြင်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်တွေကို လုပ်ကြံခံခဲ့တာဟာ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကို ဖျက်ဆီးသွားတာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
ဒီကနေ့ မြန်မာအစိုးရနဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်ဆဲရေး ပျက်သွားပြီး လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေ ပြန်ဖြစ်လာတဲ့ KIA ကချင်လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ ရဲ့ ဒု-ဥက္ကဌ ဂေါ်ရီဇော်ဆိုင်း က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်တွေ လုပ်ကြံခံရတာဟာ ပြည်ထောင်စု အတွက် နစ်နာမှု ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
နာဂအမျိုးသား ဒီမိုကေ၇စီအဖွဲ့ချုပ် NNLD ရဲ့ ဥက္ကဌ ဦးဆောဆ ကလည်း သူတို့ တိုင်းရင်းသားတွေဟာ အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ လမ်းစဉ်ကို အမြဲ လိုက်နာခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
တိုင်းရင်းသား လူမျိုးတွေရဲ့ အာဇာနည်နေ့နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမြင် သဘောထားတွေ ဦးခင်မောင်စိုးမင်း က စုစည်း တင်ပြထားပါတယ်။
ဇူလိုင် ၇ ရက် ကျောင်းသား အရေးတော်ပုံ ကိုယ်တွေ့ ကြုံခဲ့သူ ကျောင်းသားဟောင်းများရဲ့ ပြောပြချက်
၁၉၆၂ ဇူလိုင် ( ၇ ) ရက်နေ့မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေ၀င်း ဦးဆောင်တဲ့ တော်လှန်ရေး ကောင်စီက ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ မတရားတဲ့ ကျောင်းဆောင် စည်းကမ်းတွေကို ကန့်ကွက်ပြီး ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ဝင်း အတွင်း အာခံ ဆန့်ကျင်တဲ့ ဆန္ဒပြကြတဲ့ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေကို စစ်တပ်က ရက်ရက်စက်စက် မောင်းပြန် လက်နက်တွေနဲ့ ပစ်ခတ် သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒဂုံတာရာ ရဲ့ ဇူလိုင် ၇ ရက် ကိုယ်တွေ့
အသက် ၉၃ နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ ၀ါရင့် စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာကြီး ဒဂုံတာရာဟာ ၁၉၃၈ ၀န်းကျင်က ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်မှာ ကိုအောင်ဆန်း၊ ကိုဗဟိန်းတို့နဲ့ အတူ ကျောင်းသား သမဂ္ဂ ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင် တဦး အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာကြီး ဒဂုံတာရာဟာ ၁၉၆၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်း အာဏာသိမ်း စစ်အစိုးရရဲ့ လက်နက်ကိုင် စစ်သားတွေက ကျောင်းသားတွေကို ပစ်ခတ်ခဲ့ အပြီး အချိန်ပိုင်း အတွင်းမှာဘဲ ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် ကောလိပ်ဂျင် နေ၀င်းနဲ့ အတူ အင်းယားလမ်းက တဆင့် တက္ကသိုလ် ကျောင်းဝင်း အတွင်း ကားတစီးနဲ့ ရောက်ရှိသွားခဲ့ပုံ၊ ကျောင်းသားတွေ ၁၀၀ ကျော်လောက် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ အတွက် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ပြီး ဗကသ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် သမိုင်းပညာရှင် ဒေါက်တာ သန်းထွန်းနဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့ရာမှာ တယောက်နဲ့ တယောက် စကားမပြောနိုင်တဲ့ အထိ စိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရပုံ၊ နောက်တနေ့ ဇူလိုင်လ ၈ ရက်နေ့မှာ ယမ်းငွေ့တွေ သန်းနေဆဲ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက်အဦးကြီးကို ၀မ်းနည်းစွာ မြင်တွေ့ခဲ့ရပုံ၊ သမဂ္ဂ အဆောက်အဦးကြီး အတွင်း ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ပန်းချီကားချပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ နှမြောတသ ဖြစ်ရပုံတွေကို ပြန်ပြောင်း ပြောပြထားပါတယ်။
စာရေးဆရာကြီး ဒဂုံတာရာကို RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်ကျော်အောင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်း တင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
စာရေးဆရာမောင်ဝံသ ရဲ့ ဇူလိုင် ၇ ရက် ကိုယ်တွေ့ ၁၉၆၂ ဇူလိုင် ၇ ရက်နေ့7july ကျောင်းသားအရေးတော်ပုံက အဖြစ်အပျက်တွေကို အခု နှစ် ၅၀ တိုင်လာခဲ့တဲ့ အချိန်အထိ မမေ့နိုင်စရာပါလို့ ဆရာမောင်ဝံသက ဆိုပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်က ဥပစာ ၀ိဇ္ဇာ ( ခ ) ဒုတိယနှစ် ကျောင်းသား ဖြစ်သူ ဆရာမောင်ဝံသဟာ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ညီညွတ်ရေး တပ်ဦး အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေ၀င်း ခေါင်းဆောင်တဲ့ တော်လှန်ရေး ကောင်စီက အာဏာသိမ်းတာကို ကျောင်းသား သမဂ္ဂတွေက ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်ရာ ကနေ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေ၀င်း အစိုးရက ကျောင်းသားတွေကို ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ် လာတာကြောင့် ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့မှာ ကျောင်းသားတွေ ကျောင်းသား သမဂ္ဂအဆောက်အအုံမှာ စုဝေးပြီး ဆန္ဒပြကြဖို့ စည်းဝေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ပုံ၊ သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ အတိုင်း ဇူလိုင် ၇ ရက်နေ့မှာ ကျောင်းသားတွေ ဆန္ဒပြကြပုံ၊ စစ်တပ်က အကြမ်းဖက် နှိမ်နှင်းခဲ့တဲ့နေ့က အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ နောက်တနေ့ နံနက် ကျောင်းသား သမဂ္ဂ အဆောက်အအုံကြီး ဖြိုချ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေက ဆရာမောင်ဝံသရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ဒေါ်ခင်ခင်အိ က မေးမြန်း တင်ပြထားပါတယ်။
ဦးဖုန်းကျော်နဲ့ ဦးသာဘန်း အတွေ့အကြုံ ကျောင်းသား သမဂ္ဂ အဆောက်အအုံကိုလည်း ဖေါက်ခွဲ ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့7July အရေးတော်ပုံဟာ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ဖျောက်ဖျက်လို့ မရအောင် စွန်းထင်း ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းတွေကို အဲဒီအချိန်က ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူ ဦးဖုန်းကျော်နဲ့ ဦးသာဘန်းတို့ကို ကိုနေရိန်ကျော်က ဆက်သွယ် မေးမြန်းပြီး တင်ပြထားပါတယ်။
ဦးစိန်လှဦးအတွေ့အကြုံ အစိုးရ စစ်တပ်က ကျောင်းသားတွေကို ပစ်ခတ်ခဲ့ပုံ၊ နောက်တနေ့ ဇူလိုင် ၈ ရက် မနက် လင်းအားကြီးမှာ ကျောင်းသား သမဂ္ဂ အဆောက်အအုံကို ဗုံးခွဲ ဖျက်ဆီးခဲ့ပုံတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း သတင်းစာဆရာ ဦးစိန်လှဦးရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ကိုလည်း ဒေါ်ခင်ခင်အိက မေးမြန်း တင်ဆက်ထားပါတယ်။
`ပြည်ပရောက် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေကြား သွေးစည်း ညီညွတ်မှု ခိုင်မာဖို့ အတွက်ကတော့ အဖွဲ့ဝင်တွေ ကိုယ်တိုင်က ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ကိုယ်တိုင် ညီညွတ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒ မရှိလို့ကတော့ ညီညွတ်ရေး တရား ဟောလည်းပဲ အချည်းနှီး ဖြစ်မှာပါ။ …
မညီညွတ်လို့ ရှိရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပန်းတိုင် ကိုယ့်တိုင်းပြည် ပိုလို့ပိုလို့ ဒုက္ခရောက်မယ် ဆိုတာကိုတော့ သတိရစေချင် ပါတယ်`…… `နိုင်ငံရေး လုပ်တယ်ဆိုတာ ပြည်သူနဲ့ ထိတွေ့မှု ရှိဖို့ လိုပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ရန်ကုန်မှာပဲ ထိုင်နေလို့တော့ မဖြစ်ပါဘူး။ ကိုယ့်အဖွဲ့ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေကိုလည်း သင့်တင့်သလို ကြည့်ရှု လေ့လာဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီအကြောင်းတွေကြောင့် နယ်ခရီး ထွက်ဖို့ စီစဉ်တာပါ` လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့က ကျောင်းသား ကိုလေးမော်၊ ပဲခူးမြို့က လယ်သမား ကိုကျော်ကျော် ၊ တာချီလိတ်က ကိုဖိုးသာအောင်၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ဒေါ်ခင်စန်းနွယ်နဲ့ Mrs. Ann Soe၊ ထိုင်းနိုင်ငံက မမွန်းနေလီ ၊ ဂျပန်နိုင်ငံက ကိုဟန်ဝင်းထွန်းနဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံက ကိုမျိုးသူရိန်တို့ (၈) ဦးရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီတပတ် ဖြေကြားထားပါတယ်။
မေလ ၂၇ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
“NLD နဲ့ ကျွန်မက မူအရ မြန်မာနိုင်ငံကို အင်္ဂလိပ်လို Burma လို့ပဲ ပြောပါတယ်။ မူအရလိ်ု့ ဆိုရတာကတော့ နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ အမည်ကို ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ပြောင်းပြီး ခေါ်တဲ့ ကိစ္စဆိုတာ ပြည်သူများရဲ့ ဆန္ဒကို မရယူပဲ လုပ်သင့်တဲ့အရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် နဝတက မိမိတို့ ဆန္ဒတခုတည်းနဲ့သာ ပြောင်းပြီး ခေါ်ခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်လို Myanmar ဆိုတာကို ကျွန်မတို့ လက်မခံတာ ဖြစ်ပါတယ်” လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယားက မနီလာစိန်နဲ့ ကိုထွန်းထွန်းဦး၊ ဂျပန်နိုင်ငံက ကိုမိုက်ကယ်၊ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ကင်မုချောလ်နဲ့ မဥမ္မာ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ ဗန်ကောက်က ကိုမောင်ဇော်တို့ရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြန်လည်ဖြေဆိုထားပါတယ်။
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (မေလ ၂၇ ရက်)
Categories: Special Programs, Weekly Features
Thailand Likely to Repatriate Rohingya
Burmese ethnic minority members could face persecution if they are returned home.
Two boats carrying Rohingya from Arakan state washed ashore in Thailand on their way to Malaysia.
Two groups of Rohingya are in police custody in Thailand after their boats came ashore on their way to Malaysia and will most likely be repatriated to Burma where they face persecution, according to officials in Thailand and an advocacy group.
The Muslim, Bengali-speaking Rohingya from Burma’s northern Arakan state are described by the United Nations as one of the world’s most persecuted minorities.
Chris Lewa, coordinator of the Arakan Project in Geneva, told RFA that the 158 mostly Rohingya men being temporarily held in southern Thailand could face persecution upon their return.
“It looks like they are going to be handed over to immigration, but I am extremely worried about reports … that they are going to be deported to Myanmar,” she said, using Burma’s official name.
“We all know that Myanmar does not accept Rohingya back, so when they mention deportation I am concerned that this could mean that they might put them back on boats in the sea.”
One boat carrying 91 men arrived in Thailand’s Trang province on Jan. 22 followed byasecond boat the next day carrying 67 on Sarai Island in Satun province. Both boats suffered engine failures on their way to Malaysia.
Thai Police Colonel Putthipong Musikul, of the immigration office in Songkhla province where one group is being held, said they would be sent back to Burma, probably within one or two days, AFP reported.
“We are providing basic humanitarian assistance with food and water, but they were illegal immigrants. We have to follow our laws,” said Visit Tangpong, police chief in Trang province’s Kantang district, according to the report.
“I can be anywhere, except in Myanmar, if I went back I would be dead,” Rohingya Noori Shalom told CNN in an interview fromapolice station in Satun province.
He said he came from the Burmese town of Mondul, leaving his wife and two children behind to findabetter life.
According to reports,atotal of eight boats carrying Rohingya had left Arakan state and Bangladesh since Dec. 20, though there have been no reports of the other boats’ whereabouts.
While 28,000 minority Rohingya are in official refugee camps in Bangladesh, another 200,000 live in the Burma-Bangladesh border areas, the annual Human Rights Watch report released this week said.
When asked whether Thailand would consider sending the Rohingya on to Malaysia where they hoped to go, Lewa said, “I doubt very much that the Thais would do that.”
“One of my worries is that they would try to send them … to the Burmese Navy. [That they] would bring them to the Myanmar side, instead of to the Malaysian side.”
“And then what will the Burmese Navy do? … We have received some rumors that if they catch them close to Bangladesh they would send the boats back to Bangladesh … but that if they find them in any other place, to just shoot them.”
The Rohingya were believed to be fleeingacrackdown by Burma’s military junta on the minority group following the country’s November elections, according to Lewa.
“During the election campaign, the authorities in Burma were actually promising citizenship to the Rohingya. They also allowed the Rohingya to vote during the election and allowed them to stand as candidates. During that time there wasarelaxation of some of the restrictions,” she said.
“Unfortunately, the day after the election, that was already changed. The restrictions were put in place again … [and] are more than they were before.”
Lewa said that during the campaign, Burmese leaders had visited Arakan state, granting permission and providing funds to rebuildamosque. But immediately after the election, the same leaders gave orders to stop the work.
Also, she said,anumber of Rohingya opposition party members were arrested in the aftermath of the elections, casting doubts on the ethnic group’s future under any post-election Burmese administration.
A safer destination?
Lewa said that sinceaboat full of Rohingya made it safely to Malaysia last year, brokers who organize the perilous journeys came to see the country asasafer destination than Thailand, which drew criticism in 2009 for towingaboat of the refugees out to sea and leaving them adrift.
“The boat that arrived in March 2010 … showed that it was possible to arrive in Malaysia and that the Malaysians would rescue them.”
She said that reports have suggested that in the eight boats which have set sail since the end of December, all passengers were told by their agents that they were heading to Malaysia, not to Thailand.
Lewa also called on Southeast Asian countries to agree uponaregional response to protect the Rohingya.
“Something should happen in Burma to improve the situation [for the Rohingya] and much more pressure should be placed on the [Burmese] authorities. Now with the parliament and the new government there is still some hope that this could happen,” she said.
The Rohingya drew global attention in 2009 when the Thai military was accused of towing the boats of as many as 1,000 asylum-seekers out to sea and leaving them to drift at the mercy of the currents without adequate food and water.
The Rohingya claim they are Muslim descendants of Persian, Turkish, Bengali, and Pathan traders, who migrated to Burma as early as the 7th century. But their ethnic identity is not widely recognized.
Reported by Kyaw Min Htun for RFA’s Burmese service. Written in English by Joshua Lipes.
Categories: English, News, Special Programs
Categories: Interviews, Special Programs, Weekly Features